Umxube - Wikipedia
ngokwakwakhemestri, umxube yinto eyenziwe ngezinto ezimbini nangaphezulu. Ezi zinto zisenokuba ngamalungu eekhemikhali okanye zibe ngumdibaniso weekhemikhali ngeekhemikhali. Umxube usenokuba ngamanzi, into engengomanzi, ejiyileyo neqinileyo, okanye igesi.
Umxube awufani nomdibaniso owenziwe ngee-atom ezimbini nangaphezulu, apho ke i-atom nganye ixokomezelelwe kwenye ngekhonco ekuthiwa yibond. Umzekelo, umxube weegesi ihydrogen nenitrogen une-hydrogen ne-nitrogen, kungasiyio umdibaniso oyiammonia eyenziwe ngee-atom ze-hydrogen ne-nitrogen.
Xa kuthe kanti izinto ezixutyiweyo zingoomakufanwe xa zizonke ubunjani bento, njengezinto ezingengomanzi (izinto ezibujiya okanye ezibuqina kunamanzi, neziqinileyo), ezinje ngee-solid ezimbini, kuthiwa ngumxube womakufanwe. Ukuba izinto ezimbini ezahlukeneyo zidityanisiwe, njengentlabathi namanzi, ngumxube oheterogeneous.
Ukuba into enye kumxube inyibilika kwenye, ibizwa ngokuba yi-solution. Umzekelo, ukuba iswekile igalelwa emanzini yenza umxube, ize inyibilike ukuze kwenzeke i-solution. Ukuba ayinyibiliki, kuyakuthiwa yi-suspension.
Kanti nezinto ezingengomanzi, ezo zijiyileyo nezibuqina, zingayimixube. Iindidi zomhlaba ezininzi namatye olwalwa ayimixube [[iiminerali|yee-minerali ezahlukeneyo.
Last edited on 17 EyeThupha 2015, at 09:23
Eli khasi lagqityelwa ukulungiswa kwi-17 EyeThupha 2015, kwi-09:23